Iibso Poco F2 Pro: sababaha loo sameeyo marka uu suuqa ku dhaco | Androidsis
Shalay waxaan ku dhawaaqnay imaatinka Titan-ka cusub ee shirkadda Xiaomi. Hadduu Little F2 Pro Waxay horeyba u tahay rasmi, moodel u yimid inuu noqdo dilaaga calanka cusub. Hubkooda? Naqshad aad u soo jiidasho leh, marka lagu daro astaamaha ku sarraysiiya qaybta sare. Oo iska jir, waxan oo dhan qiimo dumis.
Laakiin runtii ma u qalantaa iibso Poco F2 Pro? Weli waxaad u maleyneysaa inaad ka heli karto xalal wanaagsan, ama in calaamadaha caanka ah sida Samsung ama Huawei ay mudan yihiin iibsi.
1 Ha ka waaban inaad iibsato Poco F2 Pro haddii aad raadineyso taleefan ciyaar
2 Batariga weyn
3 Qiimaha fadeexada, sababta ugu weyn ee loo iibsado Poco F2 Pro
Ha ka waaban inaad iibsato Poco F2 Pro haddii aad raadineyso taleefan ciyaar
Kaaliyaha shirkadda 'Xiaomi' waxay daryeeshay xitaa faahfaahinta ugu yar si ay isbeddel ugu sameyso tartamayaasheeda. Iyo mid ka mid ah waxyaabaha ugu xiisaha badan ayaa la yimaada nidaamka qaboojinta dareeraha. Haa, Poco F2 Pro wuxuu ku khamaaraa qalabka ugu fiican suuqa. Dhibaatadu waxay tahay in isticmaalka sii socda ee ciyaaraha u baahan culeys weyn oo garaaf ah, gaar ahaan terminaalka leh jirka ka sameysan aluminium, uu noqon karo bambo waqti qaadata.
Laakiin Pocophone wuxuu helay xalka: nidaam dhameystiran oo ah qaboojiyaha dareeraha ah, oo ay taageerayaan dhowr lakab oo garaaf ah, oo u oggolaanaya taleefanka inuusan ku dhicin dhibaatooyinka kuleylka. Sidan oo kale, waxaad ku ciyaari kartaa Fortnite saacado adigoon wax walwal ah ka qabin.
Sidoo kale, markay arkeen astaamaha farsamada Laga soo bilaabo terminaalkan, waxaa iska cad in haddii aad rabto inaad iibsato Poco F2 Pro si aad u ciyaarto ciyaaro, ma kaa niyad jabi doono.
GOOBKA BADBAADADA GUDAHA 128 / 256 GB UFS 3.0
Laakiin dabcan, maxaa adeegsi ah astaamaha noocan oo kale ah ee awood leh haddii terminal-ka uusan i sii socon doonin maalinta oo dhan? Tani waa halka sababta labaad ay u timaado sababta iibsashada Poco F2 Pro ay tahay guul guud.
Sida aad ku arki karto sawirka hogaaminaya xariiqyadan, soo saaraha Aasiya ayaa doortay modoul leh 4.700 mAh, in ka badan oo ku filan siinta madax-bannaanid aad u fiican. Intaa waxaa dheer, shaashadda PocoPhone F2 Pro waxay leedahay xallinta Full HD +, oo keydineysa ilaha marka loo eego qaanadaha QHD.
Iyo waxa ku saabsan imaatinka Android 10, oo si weyn u hagaajinaya waxtarka tamarta, oo lagu daray maareynta kheyraadka dhameystiran ee ay bixiso processor Snapdragon 865, waxay sameeyaan is biirsaday kaamil ah si batteriga Poco F2 Pro uu socon karo illaa laba maalmood. Faahfaahin weyn oo ka dhigaysa farqiga marka loo eego tartamayaasha.
Qiimaha fadeexada, sababta ugu weyn ee loo iibsado Poco F2 Pro
Iskudarka keegga ee sheyga wareega fudud waa qiime jaban. Iyo, waxaad ka iibsan kartaa Poco F2 Po oo leh 6 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo keyd ah oo kaliya 549 euros. Haa, runtii waxaa jira dallacaad ku eg 15-ka Maajo oo kuu oggolaanaya inaad keydiso 50 Yuuroo, laakiin weli waa qiimo burburin.
Xusuusnow in qaabkani uu taageero u leeyahay shabakadaha 5G, oo uu arko astaamaha farsamo, waxaa iska cad in Poco F2 Pro uu yahay terminal leh nolol waxtar leh ugu yaraan 3 ama 4 sano. Sidaa darteed, markay aragto in inta u dhexeysa qiimahaas aysan laheyn cid la tartameysa oo ugusoo dhowaaneysa marka loo eego waxqabadka, waxaa iska cad in iibsashada boosteejadan aysan khalad noqon doonin. Iyo maxay ku kala duwan yihiin Samsung Galaxy S20 tusaale ahaan? Inta badan xallinta shaashadda, ku-dallaca wireless, caabbinta biyaha iyo qaybta sawir qaadista.
Intaa waxaa sii dheer, iyada oo la tixgelinayo in Isbaanishka moodada leh processor Exynos ay timid, wax aad uga yar jajabka taajkii Qualcomm, waa xaqiiqo in Poco F2 Pro uu bixin doono waxqabad wanaagsan ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Shiinaha Shiinaha » 3 sababood oo loo iibsado Poco F2 Pro
HMD Global ayaa ugu dambeyn sii deysay Android 10 oo loogu talagalay Nokia 3.1 Plus
4 badal aad ufiican oo kumbuyuutarka Microsoft SwiftKey ah